Hay'adda safarka Premnitz Rathenow ☀️ Brandenburg ✅ ilaa 1998
Ku bood nuxurka
Waxay bixiyaan hoteello
Kaambo - raadinta qadka tooska ah ee 'Mosel'
Fasaxyada Jarmalka - dowladaha federaalku
AIDA waxay bixisaa
AIDA daqiiqadii ugu dambeysay
Samee duullimaad qorsheysan
Samee duullimaad warqadeed
Is-diiwaangelinta khadka tooska ah
Kubadda Cagta UEFA EURO 2020-2021
Ciyaaraha Olombikada 2020-2021
Safarada basaska-Safarada baska
Doomaha webiga Rhine Main Moselle
Khariidadda kiisaska coronavirus ee Jarmalka
Khariidadda khariidadda xaaladaha cudurka coronavirus adduunka oo dhan
Caymiska safarka ee caymiska safarka onlayn
U qor baabuur kiro ah
xiriiriye waxtar leh
Ku soo dhowow Premnitz iyo Rathenow!
Telefoonka adeegga +49 3386/210 110
Sababta oo ah Dhibaatada Corona waxaan kuu diyaarinnay khadka tooska ah ee tooska ah halkaas oo aan uga jawaabno su'aalaha ku saabsan hirgelinta iyo baajinta safarkaaga.
Naga soo waca ama noo soo qor anaga WhatsApp.
wararkii ugu dambeeyay ee safarka
dib-u-qoris bilaash ah iyo ka-noqosho 3. December 2020
Dubai waxay dhiseysaa hudheelka ugu dheer adduunka 16. Nofeembar 2020
Jasiiradaha Canary - Tijaabada kororka xun ee qasabka ah marka la galo 2. Nofeembar 2020
Xafiiska Arimaha Dibadda wuxuu qaadaa digniinta safarka ee jasiiradaha Canary 26. October 2020
Xeebaha ugu quruxda badan adduunka 2020 28. Sebtembar 2020
Wadamada aan lahayn digniinta safarka 18. Sebtembar 2020
Digniinta safarka ee 38 dal oo kale waa in la tuuraa 17. Sebtembar 2020
Kuwani waa waddooyinka baaskiillada ugu caansan Jarmalka. 7. Sebtembar 2020
Fasaxyada ciidda dahabka ah ee Bulgaria mar labaad ayay suurtagal tahay mar labaad 25. August 2020
Vacation Denmark - U safridda Danmark mar kale macquul iyadoo aan joogin ugu yaraan 19. August 2020
Wakaaladaada safarka ee Premnitz - Rathenow iyo dhamaan Brandenburg
Waxay jirtay ilaa 1998 Hay'adda safarka Premnitz iyo tan Hay'adda safarka ee Rathenow. Maadaama aan nahay wakaaladda safarka ee agagaaraha, waxaan kaaala talin doonnaa dhammaan baahiyahaaga safarka waxaanan ku siin doonnaa adeeg aan la barbardhigi karin, karti xagga talo bixinta, aqoon ballaadhan oo ku saabsan gobollada fasaxyada ugu badan iyo xiisaha weyn ee safarka! Macaamiishayadu ma aha oo kaliya inay ka yimaadaan Rathenow iyo Premnitz laakiin sidoo kale waxay ka yimaadaan Brandenburg iyo Havelland oo dhan.
Waxaan ku faraxsanaan lahayn inaan kugula talino taleefoonka, emayl ahaan ama, sida la doorbido, shaqsiyan labadeena xafiis ee ku yaal Rathenow ee Xarunta Magaalada iyo Premnitz ee Bergstrasse 46 (Gobolka Brandenburg).
Adigoo ah adeeg gaar ah, waxaad diyaarin kartaa ballan macaamiil go'an! Markaa waad fadhiisan kartaa oo xasilloonaan kartaa oo talo heli kartaa adigoon waqti cadaadis lahayn. Noo soo dir e-mayl leh waqtiga ballantaada mail@reisecafe-premnitz.de ama naga soo wac 03386 210110.
Waxaad ka heli doontaa qaybo badan oo kala duwan safarka websaydhka. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, waan ku faraxsanaan doonnaa inaan ku caawino.
hoos ku Booqashada xirmada waxaad ka heli kartaa makiinado ballansashada oo aad ka heli karto mid ka duwan Angebote soo bandhigi kartaa gobol, tusaale ahaan. Under dhammaan loo wada dhan yahay dalabyada safarka ee socda ayaa la muujiyay. Qeybta daqiiqadii ugu dambeeyey wuxuu ku siinayaa liiska meelaha aad u safri karto oo hada la heli karo. Haddii aad isticmaasho shaandhaynta kala duwan, waxaad sidoo kale isla markiiba ku qaadan kartaa safar dhammaystiran ama hal khad toos ah oo internetka ah Hoteel u qor. Qeybta ugu dambeysa Fasaxyada Jarmalka waxaad ka heli doontaa sharraxaad kooban oo ku saabsan 16-ka dawladood ee federaaliga ah oo leh xiriirin meelaha kale ee lagu arko iyo meelaha fasaxa ee dal walba.
Maxaad mid u sameyn weyday doonnida! Xulo u kala duwan Aida waxay bixisaa ama wixii ugu dambeeyay ha helo Aida daqiiqadii ugu dambeysay Fiiri doonyaha. The Aida Cruises waxay shaqeysaa howlo kala duwan Wadooyinka adduunka oo dhan. Iyada oo Caymiska Aida Vario iska jir Safarka markabka wax aan la rabin.
Waxaad tahay xayeysiis soo noqnoqda oo aad doorbideyso inaad si sahlan u sahamiso meelaha aad u safreyso safarkaaga shaqsi ahaan. Anaga buugga Kuwa Jadwalka duulista oder Duullimaadyada Jaartarka iyada. Si sahlan ayaad u isticmaali kartaa qadka internetka laga galo fuliyaan kuwaaga adigoon wakhti dheer sugin diyaarad tartami kara.
Takhasuska kale ee wakaaladda safarka Premnitz iyo wakaaladda safarka Rathenow (Land Brandenburg) waa safar isboorti. Hadaad leedahay a safarka ku Ciyaaraha Olombikada ee lagu qabtay Japan Tokyo 2021 qorshaynta oo ay kujirto tigidhada tartamada shaqsiyeed, waxaan adiga kuguula xiriirineynaa sax. Ee Tartanka Kubadda Cagta Yurub ee Qaaradda Yurub 2021 waxaan ku siin karnaa xirmo isku dhafan oo duulimaad ah, Hotel oo u bixi tikidhada ciyaaraha shaqsiyeed.
Xiriirka Premnitz Rathenow Brandenburg
Ururka Dalxiiska Jarmalka
Shuruudo muhiim ah oo ka socda waaxda dalxiiska
Waa maxay macnaha dhammaan loo wada dhan yahay?
Dhammaan waxyaabaha loo wada dhan yahay waxaa ka mid ah cuntada oo keliya laakiin sidoo kale dhammaan cabitaannada khamriga iyo kuwa aan khamriga ahayn.
Is Waa maxay daqiiqada ugu dambeysa?
Qor buugga daqiiqadda ugu dambeysa saddex bilood illaa laba toddobaad laga soo bilaabo bilowga safarkaaga. Inta lagu guda jiro muddadaas waxaa suurogal ah in la qoro boosaska harsan ee rakhiis ah ama meelaha la baajiyay.
✅ Waa maxay socdaalka xirmada?
Haddii duullimaadyada iyo hoteelku horeyba loogu soo daro qiimaha dalxiiska oo dalxiiskuna uu abaabulayo hawlwadeenada dalxiis, waxaa lagu magacaabaa socdaalka xirmada. Adeegyada dheeraadka ah ee socdaalka xirmada ayaa sidoo kale noqon kara wareejinta hudheelka ama cuntada oo dhan.
Agency Wakaaladda socdaalka Premnitz - Waqtiyada furitaanka Rathenow?
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 9.00-ka subaxnimo ilaa 18.00-da galabnimo Sabtida laga bilaabo 9.00-ka subaxnimo ilaa 12.00-ka duhurnimo Wuxuu xidhan yahay Axadaha.
Hay'adda safarka Premnitz
Hay'adda safarka ee Rathenow
Xarunta Magaalada, 14712 Rathenow
Dhamaan loo wada dhan yahay
Qaxwada safarka ee Facebook
Maqaayadda safarka ee Instagram
Cafe safarka Youtube
Mahadsanid WordPress | Mowduuca: Sydney by athemes.